Tafatafa amin’i Kosoof, Bilaogeran-tsary Iraniana malaza · Global Voices teny Malagasy
Tafatafa amin'i Kosoof, Bilaogeran-tsary Iraniana malaza
Voadika ny 14 Jolay 2018 6:04 GMT
Bilaogeran-tsary malaza i Arash Ashoorinia izay efa nahazo ny lokan'ny Reporters Without Borders tamin'ny fifaninanana BOBs (Bilaogy Tsara Indrindra) nokarakarain'ny Deutsche Welle fampielezan-tsary Alemà ny bilaoginy manana anarana Kosoof. Navoaka manerana izao tontolo izao tamin'ny famoahana sy tranonkala toy ny Washington Post sy Global Voices ny sarin'i Arash. Nanana fahafahana nitafatafa tamin'i Arash i Hamid Tehrani ato amin'ny Global Voices.
HT: Azonao atao ve ny mampahafantatra ny tenanao sy ny bilaoginao?
AA: Arash Ashoorinia no anarako. 26 taona aho ary nanomboka nanao fakàna sary aho efa ho 6 taona lasa izay. Nanomboka ny bilaogiko aho tamin'ny taona 2004. Talohan'ny nanombohako ny bilaogin-tsary, namorona tranonkala aho ary rehefa avy nanomboka ny blaogiko momba ny sary, dia nandao ny famoronana aho. Raha vao nanomboka ny Kosoof aho, dia te-hanana bilaogin-tsary tsotra hanehoana ny santionany amin'ny sangan'asako. Sary avy amin'ny zavaboary, toerana an-drenivohitra sy ireo toerana iainantsika. Te haneho ny zavatra sy ny zava-misy izay tsy hitan'ny sasany na tsy raharahiana aho, ka indraindray aho mitantara ny zava-mitranga amin'ny lanjan'ny vaovao. Satria ny ankamaroan'ny vaovao sy ny sary dia misy ifandraisany amin'ny sivana ao Iran.
HT: Ahoana no fandaminanao mahatonga anao ho tonga ara-potoana eny amin'ny toerana mba haka sary?
AA: Misy ireo mpaka sary hafa tsy tonga amin'ny lanonana manokana satria tsy liana amin'ireny lanonana ireny ry zareo. Tsy mieritreritra ny zava-mitranga tahaka ahy ry zareo, ary tsy manana toerana hamoahana ny sarin'izy ireo (satria tsy manana media malalaka izahay eto) na tsy sahy fotsiny manatona ireo lanonana mety hampidi-doza.
HT: Mihevitra ve ianao fa manaja ny zon'ny mpamorona amin'ny bilaogy sy ny bilaogin-tsary amin'ny ankapobeny ny haino aman-jery nentim-paharazana ?
AA: Tsy isan'andro! Amin'ny ankapobeny dia tsy nandray vola avy amin'ny Kosoof aho. Maro mihitsy aza ny olona nanapaka ny sarin'ny Kosoof eo ambanin'ny sary ary tsy nanonona ny anaran'ny mpaka sary na nanoritsoritra ny lanonana. Mahazatra loatra amin'ny habaka sy tranokalam-baovao Iraniana ity fihetsika ity. Mangataka alalana aty amiko ireo tranonkala, mailaka malaza ary tsy tsaroako nandà azy ireo na nangataka vola tamin'izy ireo aho.
HT: Nisy hetsika nanenenanao ve ny tsy naha-teo anao?
AA: Eny! Manenina imbetsaka aho. Ny fakàna sary ao Iran dia toy ny mandalo Ny Manda Lehibe ao Shina! Ary matetika tsy azo atao amin'ny tranga maro.
HT: Navoaka manerantany ny sarinao. Nohajaina ve ny sangan'asanao? Efa niatrika loza ve ianao?
AA: Tsy mila alalana amin'ny asa soratrao ianao ary raha ankaton'ny manampahefana ny tranonkalanao, dia azonao ampiasaina ny proxies mba hialàna amin'ireo sivana sy hanohizana ny asanao. Manome fomba hahazoana namana sy fifandraisana amin'izao tontolo izao ny bilaogy, miaraka amin'ireo mpiray tanindrazana aminao sy ny olona manerana izao tontolo izao. Saingy marina mihitsy fa misy ny loza sasany eo anivon'ny fiarahamonina Iraniana. Nisy tranga sasany izay nisamboran'ny governemanta ireo bilaogera sasany noho izay nosoratan'izy ireo tao amin'ny tranonkalan'izy ireo. Ary amin'ny maha-bilaogeran-tsary ahy, mety hiatrika olana maro sy hetsika tsy ampoizina ianao mandritra ny fanaovanao ny asanao.
HT: Manana fisiana lehibe eo amin'ny bilaogy Iraniana ve ny sary na ny vokatra media marolafy sa mbola ny lahatsoratra no tena manjaka amin'ny bilaogy?
AA: Hita amin'ny bilaogy Iraniana ny sary sy ny media marolafy hafa, saingy toa tsy matotra loatra izy ireo. Betsaka no manoratra bilaogy ara-potoana ary mieritreritra fa asa iray manan-danja na mahomby io, saingy vitsy no mamokatra sary matihanina na tena asa fanaovan-gazety eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Iraniana. Amin'ny ankapobeny, mitady ho fialam-boly kokoa ny bilaogin-tsary na mandefa sary izay efa navoaka teo aloha tamin'ny gazety na sampam-pahalalaham-baovao ho toy ny santionany amin'ny sangan'asany ireo mpaka sary matihanina. Amin'ny ankapobeny, amin'ny tranga vitsivitsy ihany no mametraka sary vaovao ao amin'ny bilaoginy ny olona.
HT: Misy tetikasa, hevitra na fanehoan-kevitra zaraina amin'ny mpamaky ny GV ve?
AA: Angamba afaka manomboka sehatra antsoina hoe “Sarin'izao Tontolo izao” ny Global Voices, noho izany dia afaka miresaka amin'izay kendrena ny sary. Amin'ny tranga maro, mahomby kokoa ny sary iray noho ny teny an'arivony ary afaka mampiseho ny zava-misy tsara kokoa noho ny teny ianao.